DigiGlot Newsletter: Mitondra vaovao tsara sy vaovao ratsy ho an’ny fiteny an-dalampahaverezana sy ny vitsy an’isa ny zava-baovao Fahaizana Artifisialy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Marsa 2019 4:55 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Français, srpski, Esperanto , Italiano, English
Saripikan'i albyantoniazzi ary nampiasana teo ambanin'ny lisansa CC BY-NC-SA 2.0.
Misy tombontsoa goavana amin'ny teknolojian'ny Fahaizana Tsy voajanahary (Artifisialy) (FA) izay afaka mandika ny tenin'ny olombelona amin'ny fomba samihafa. Ny chatbots, rindrambaiko fandikan-teny, sy ny mpanampy mahay tahaka ny Siri na Alexa dia samy miankina amin'ny fahatakarana ny fomba fampiasantsika ny fiteny.
Herinandro vitsy lasa izay, namoaka taratasy mampiseho ny fomba fiasany vaovao amin'ny famolavolana ara-tsolosaina ny fiteny Anglisy ny orisanam-pikarohana tsy mitady tombontsoa OpenAI. Manome ohatra maromaro misy ireo lahatsoratra avoakan'ny solosaina avy amin'ny maodeliny vaovao izay lazainy fa tsy azo sarahina amin'izay mety vokarin'ny olombelona ireo mpanoratra. Nanapa-kevitra tsy hamoaka ilay maodely ny OpenAI noho ny tahotra sao ampiasaina tsy araka ny ho tokony izy izany, ohatra, mamoronana roboto mpisompatra ao amin'ny Twitter na tambajotra sosialy hafa.
Toy ny mahazatra, mety midika hoe vaovao tsara sy vaovao ratsy ho an'ny teny indizeny sy vitsy an'isa izany. Ny vaovao tsara dia tsy mila tahiry manokana hatsangana ireo maodely ireo; azo amboarina izy ireo rehefa manana angon-dahatsoratra ampy amin'ny teny kinendriny ireo programera (ohatra avy amin'ny Wikipedia). Raha vao voatsangana ilay maodely, dia azo ampiasaina hamolavolana FA mivoatra kokoa amin'izany fiteny izany.
Vaovao ratsy vitsivitsy: Voalohany, mitaky lahatsoratra marobe hatsangana ireo maodely ireo, voambolana an-tapitrisany na amina miliara, sy fitaovam-pikajiana goavambe. Faharoa, mbola mifantoka amin'ny teny anglisy ny 100% ny fikarohana amin'ity sehatra ity ary tsy misy antoka fa hitovy fomba fiasa ho an'ny fiteny sarotra kokoa ireo maodely ireo. Ary zava-dehibe foana ny mahatsiaro fa azo ampiasaina mora foana ireo teknolojia ireo mba ho an'ny tombontsoam-bahoaka araka izay azony atao mba hanamoràna ny fanangonana tahiry ataon'ny orinasan'ny teknolojia. Na izany aza, manantena izahay fa hahita fikarohana bebe kokoa amin'ity sehatra ity ho an'ny fiteny tsy dia manana famatsiam-bola ary farany ho an'ny teknolojia FA izay manohana ireo teny ireo.
Henoy ny “Bitsibitsika farany” amin'ny fiteny miala aina
Manontany ny ankamantatra zen efa anjato taonany : Inona ny feon'ny tanana iray mitehaka? Natao hanafaka ny olona amin'ny toe-tsain'izy ireo mahazatra izany mba hanomezana fomba fisainana hafa.
Rehefa nijery ny fahasamihafan'ny fiteny manerantany ilay mpanakanto momba ny media marolafy, Lena Herzog, ary nandray fepetra manoloana ny taha mampatahotra amin'ny fahafatesan'ny fiteny, dia nanapa-kevitra ny hampiseho ireo fiteny tandindomin-doza amin'ny fomba hafa tanteraka izy.
Nanangona ireo fandraketana fiteny an-dalam-pahaverezana tamin'ny alalan'ny lahatsary drôna misy ireo toerana voajanahary izy mba hamokatra izay lazainy fa “oratario milentika mandritra ny 45 minitra.” Ny vokatra, antsoina hoe Last Whispers dia fitsidihana am-peo sy an-tsary mainty sy fotsy amin'ny alalan'ny ala misy feo ao Tehuelche, Nivkh, Nahuatl, Warlpiri, Ainu, Koyukon, Nafsan, Jul'hoan, Surel, Ongota ary Qaqet. Rehefa tsy manana intsony ireo mpampiasa azy farany ireo fiteny ireo, dia tafalatsaka ao anatin'ny ala mangina ny mpihaino.
Mandrakitra an-tsarintany ny fiteny voalohany ao Aostralia
Vao haingana ny Fiteny Voalohany ao Aostralia no nanavao ny loharanom-baovaony antserasera Gambay izay mampiseho ireo anarana ankafizin'ireo fiteny Aborizeny sy ny saikanosy Torres Strait ary ny toerana misy azy ireo tsirairay manerana ny firenena. Ny teny hoe Gambay dia midika hoe “miaraka” amin'ny fiteny Butchulla. Nipoitra tao amin'ny Mapbox, sehatra fandraketana an-tsarintany loharano misokatra ahafahan'ireo mpiserasera mitady ny foiben'ny fiteny ao amin'ny pejy voalohany ny sarintany amin'ny ezaka hamelona indray ny fiteny, miaraka amin'ny safidy tsara kokoa hampiditra media nomerika avy amin'ny loharano samihafa.
Pikantsary tao amin'ny sarintanin'ny Gambay.
Misorata anarana hahazoana
Kevin Scannell, Filip Noubel, sy Eddie Avila no niara-nanoratra ity lahatsoratra ity miaraka amin'ny fanampian'i Ellery Biddle tamin'ny famoahana azy.